तेजेन्द्रकी आमाको मन्त्री विष्टलाई प्रश्न : कि छोरो दिनुस्, नत्र कसरी मर्‍यो भनिदिनुस् ? — Himali Sanchar
काठमाण्डौ, १९ चैत : ‘कमाउन गएको मेरो छोराको लाश पनि देख्न पाइनँ, कि छोरो दिनुस् म त्यहीसँगै मर्छु, नत्र कसरी मर्‍यो भनिदिनुस,’ बाग्लुङकी सुर्विता भण्डारीले झोलाबाट छोराको फोटो निकालेर देखाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा गोकर्ण विष्टलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
आफ्नै छोराको मृत्यु र आफ्नो पीडा सुनाउन बाग्लुङबाट सिंहदरबार आइपुगेकी सुर्विता बोलिरहनुभयो । कमाएर सुखले पालाैला आमा भन्दै परदेशिएको छोराको लाश पनि अर्कैले जलाएको खबर सुनेदेखि मनमा पलाएका अनगिन्ती प्रश्नहरु नरोकिइकन सोध्न थाल्नुभयो सुर्विता ।
सुर्विताका छोरा तेजेन्द्रसँगै साउदीमा दुर्घट्नामा परेका थिए मोरङको लक्ष्मीमार्गका सुवास । सुवास साउदीको हुण्डाई कम्पनीका काम गर्थे भने तेजेन्द्र ट्याक्सी चलाउँथें । महिनाभरीको कमाई घर पठाउन बैंक जाँदा यी दुईको भेट भयो । घरमा पैसा पठाउन बैंक गएर फर्किंदा तेजेन्द्रले चलाएको ट्याक्सीमा सुवास सहित हुण्डाई कम्पनीमा काम गर्ने अरु तीनजना नेपाली पनि थिए । तर उनीहरु कोही पनि कोठामा पुग्न पाएनन् ।
साउदीमा उपचार गराइरहेका घाइ्तेको अनुहारको पट्टी तीन महिनापछि खोलियो । तर, पट्टीभित्रको अनुहार तेजेन्द्रको नभएर बाकसमा लास ल्याएर काजकिरिया गरिसकेका सुवासको थियो । मर्‍यो भनेर किरिया गरिएको मानिस जिवित भेटियो, उपचारपछि छोरा सञ्चो भएको खबर सुन्न भगवानसित प्रार्थना गरेर बसेकी तेजेन्द्रकी आमा सुविर्ताले छोरालाई अरु कसैले दागबत्ती दिएको खबर सुन्नपर्‍यो ।
छोरोको स्वर सुन्न आतुर आमाले छोरो मरेको, लाश नेपाल आएको र आफ्नो संस्कार बिपरित सद्गत भैसकेको थाहा पाएपछि भोगेको पुत्र शोकको पीडामा पुर्नभएको छ सुर्विता । अनि आफैले काज किरिया गरिसकेको लोग्ने घर फर्किएपछि सुवासी श्रीमती सन्तोषी हर्षित त हुनुहुन्छ, तर शारीरिक र मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएर फर्किएका श्रीमानलाई कसरी सम्हाल्ने ? अनि घरबार कसरी चलाउने सन्तोषीलाई पनि उस्तै पीडा छ ।
त्यती मात्रै हैन कागजी रुपमा मरिसकेका सुवास तामाङलाई जिउँदो बनाउन पहल गर्ने पनि बताउनुभएको छ । यही आश्वासन पूरा हुने आशाको पोको बोकेर घर फर्किंदै छन् तेजेन्द्र र सुवासको परिवार । उज्यालोबाट
फेसबुक स्टाटस लेखेकै कारण पाइलट विजय लामा जापान जान वञ्चित